नेपाल आज | दलको झोला बोकेर उपकुलपति पुरस्कार पाउने थिति रहेसम्म यस्तै हो (भिडियोसहित)
दलको झोला बोकेर उपकुलपति पुरस्कार पाउने थिति रहेसम्म यस्तै हो (भिडियोसहित)
डा. तुलसीराम भण्डारी पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन् । उनल पब्लिक हेल्थमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । नेपालमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलको झोला भिरेर हिँड्नेहरुलाई प्राथमिकता दिने गरिएका कारण शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसेकेको उनको ठहर छ ।
डा. भण्डारीको मतमा नेपालमा शिक्षामा गुणस्तर सधै खोजिने तर सक्षम नेतृत्व कहिले पनि नखोजिने भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । भण्डारी भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा दुई जना सिनेट सदस्य राखेर उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्टार नियुक्तिको प्रक्रिया थालिन्छ । यो औपचारिकता दिने विधि हो । भित्री पाटो वा अनौपचारिक पक्ष पनि हुन्छ । त्यही अर्को पाटोले उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । विश्वविद्यालयको भविष्यसँग सम्बन्ध राख्ने पदहरुमा नियुक्त गर्दा सक्षम र परिवर्तन ल्याउन सक्ने मान्छे खोजिदैन । आफ्नो पार्टीको झोला बोकेको, कसैसँग निकटता भएको व्यक्ति छानेर त्यो पदमा राखिन्छ ।’
अहिले शिक्षामन्त्रीका रुपमा गिरिराजमणि पोख्रेलले चाहेर मात्रै पनि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधार आउला भन्ने आफूलाई नलागेको डा. भण्डारीको मत छ । उनी भन्छन्, ‘उहाँ पटक पटक मन्त्री त हुनुभयो । तर उहाँले केही काम गर्न सक्नुहुन्छ वा गर्न सक्नु हुन्न भन्न सकिन्न । किनभने यो क्षेत्रमा यति धेरै जटिलता थपिएका छन् जसका कारण मन्त्रीले मात्रै चाहेर पनि नहुने अवस्था आइसकेको छ ।’
नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय भइसके । विश्वविद्यालय खर्चिलो पनि हुन्छ । विश्वविद्यालय थप्दै मात्रै जाने तर गुणस्तरमा ध्यान नदिने हो भने समस्या अझ विकराल हुने डा. भण्डारीको निष्कर्ष छ ।
नेपालले उत्पादन भन्दा पनि उत्पादन गर्ने साधन नै बिक्री गरिरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामी अहिले प्रोडक्सन बेच्ने होइन, जनशक्ति बेच्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यसो हुनुको कारण विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति नै त्यस्तो भएर यो अवस्था आएको हो । आवश्यकता नै बिना सबका सबलाई गैरप्राविधिक शिक्षा दिइएको छ । युवाहरुले रोजगारी नपाउने शिक्षा दिने, युवामा फ्रस्टेसन ल्याउने स्थिति सिर्जना गरिदिने, विद्रोही बनाइदिने काम विश्वविद्यालयहरुले गरिरहेका छन् ।’